Funda ukutya kwam kwaye ufumane iinyanga ezili-12 zokuSingathwa kweWebhu kwaSimahla | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 2, 2007 Douglas Karr
Ndifuna ukukunika zonke iintloko phezulu! Inkampani yokubamba endisebenza nayo ibonelela ngeenyanga ezili-12 zokubamba simahla xa ubhalisa. Umhlobo wam, Amol Dalvi ngowokuqala ukuvavanya isivumelwano. Ndazise ukuba uthatha ithuba lesivumelwano kwaye ndiza kuqiniseka ukuba ndibhloga malunga nawe ukunceda ukuphakamisa inqanaba lakho.
Ndikhethe umphathi wam emva konyaka wokutsiba ukusuka kumamkeli ukuya kubamba. Ndinyamezele ixesha lokuphumla, inkxaso eyoyikekayo, ukuphuculwa kancinci, imisebenzi… ndide ndiye noJumpline. Ndifumene iJumpline ngokwenza umba othile Netcraft Apho ndihlalutye khona iinginginya ngezona zinga lisezantsi lokungena. Yenzakalisa ukuba iJumpline ibiphantse ayabinasiphako kwaye ibinexesha elifanelekileyo kwi-Intanethi.
Ndihambise zonke iisayithi zam (malunga ne-25) ukuya kwiJumpline kwaye ndonwabile ukusukela ngoko. Baqhuba ii -apps zakutshanje kunye nezona zibalaseleyo ngokulula I-VDS. Ukuba ufuna i-MySQL, cofa nje kwaye ifakwe. Ufuna i-PHP? Into enye. Le yeyona phakheji iphambili ye-technophobe owoyikayo kuko konke oku kubamba i-mumbo-jumbo. Luhlobo lwendwendwe osayina kunye nayo kwaye ulibale ukuba kuya kufuneka ukhathazeke ngayo.
Ukuthatha ithuba ngesibonelelo, Rhuma kwisondlo sam Kwaye uza kubona ibhena yesibhengezo phantsi kweposti nganye. Esi sibonelelo siya kuba phezulu kwiiveki ezimbini ezizayo zabafundi bam. Yisebenzise! Akukho Mitya encanyathiselwe!
Epreli 2, 2007 ngo-2: 02 PM
Ndingathanda nje ukubulela kwakhona ngokucebisa iJumpline kum kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ukuhambisa ibhlog yam yeWordPress kumamkeli omtsha kwakuyimpepho kwaye iphaneli yokulawula umsebenzisi yeJumpline yenza kube lula ukulawula izinto ezinje nge-MySQL, iidilesi ze-imeyile, njl.
Ndikhetha kakhulu ukusingathwa okubonakalayo abakubonisayo nabo. Ndineseva yam ye-Apache ngoku, ke akusekho zidenge ziphazamisa iseva ye-Apache ekwabelwana ngayo njengoko bendinayo nomamkeli wam wakudala
Ndinebhlog yam esebenzayo kwiJumpline kwiiveki ezimbalwa ngoku kwaye kude kube ngoku.
Ngethamsanqa ngale ntengiso.
Epreli 2, 2007 ngo-7: 47 PM
Enkosi, Dean! Andizukubeka igama lam emva kwenkampani ngaphandle kokuba a) ndibasebenzisile kwaye b) ndiyabathemba. Ndiye ndanikela ngeJumpline kwixa elidlulileyo kubafundi bam kodwa ayikhe yenzeke ngolu hlobo. Ndisandula ukufunda amabali amaninzi amanyumnyezi mvanje wexesha lokuphumla, inkxaso engeyiyo, kunye neyona pet yam inkulu kakhulu-iinguqulelo ezindala zesoftware!
Enye yeeplagi endizibhalileyo ndafumana iITONS zempendulo yokuba yaphulwe kwaye ayisebenzi - xa eyona nto yayizinguqulelo ezindala ze-PHP okanye iinguqulelo ezazingenamathala eencwadi alayishiwe okanye anikwe amandla.
Ke-ndaye ndagqiba kwelokuba ndibeke imali yam apho kukho umlomo wam. Ukuba ayisebenzi, ndiqinisekile ndiza kuva ngayo!
Epreli 3, 2007 ngo-9: 14 AM
Hmm izandi zinomdla. Ndijonge ukutshintsha umphathi wam wangoku kwaye ungcono kunelizwi lomlomo elinconywayo kwingcali yetekhnoloji. Ndicinga ukuba i-imma iyalisebenzisa eli thuba.
Meyi 24, 2008 kwi-11: 09 AM
Zama free-whd.com, Sisikhokelo esifanelekileyo sokubamba iwebhu. Ndiqinisekile ukuba uza kuyifumana indawo yasimahla yeWebhu oyikhangelayo.